Qiimaha Boqortooyada Eebbe, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Qiimaha sare ee boqortooyada Ilaah
Aayadaha ku jira Mark 10,17: 31-9 waxay ka tirsan yihiin qaybo u dhexeeya Mark 10 ilaa. Qeybtan waxaa cinwaan looga dhigi karaa "Qiimaha Sare ee Boqortooyada Ilaah". Wuxuu qeexayaa mudada ka hor dhamaadka nolosha Ciise ee dhulka.
Butros iyo xertii kaleba waxay hadda bilaabeen inay fahmaan in Ciise yahay Masiixa loo ballanqaaday. Hadana weli ma fahmin inuu ciise yahay Masiixa oo silcin doona inuu u adeego oo badbaadiyo. Ma fahmin qiimaha sare ee boqortooyada Ilaah - qiimaha uu Ciise ku bixinayo u hibeynta noloshiisa si uu u noqdo boqorka boqortooyada. Mana fahamsana waxay ku kici doonto iyaga inay yihiin xerta Ciise inay noqdaan muwaadiniin ku sugan boqortooyada Ilaah.
Maahan wax ku saabsan sida aan u iibsan karno marin u helidda Boqortooyada Ilaah - waxay ku saabsan tahay inaan Ciise la wadaagno noloshiisa boqornimada oo sidaas annagoo nolosheenna kula heshiinay habka nolosha ee boqortooyadiisa. Waxaa jira qiimo lagu bixinayo, Markosna wuxuu muujinayaa qaybtan isagoo muujinaya lix tayo oo ciise ah: ku tiirsanaanta ducada, is-diiditaanka, aaminnimada, deeqsinimada, is-hoosaysiinta, iyo iimaanka joogtada ah. Waxaan eegi doonaa dhammaan lixda dhisme, adoo si gaar ah u siineyna kan afraad: deeqsinimo.
Waxa ugu horeeya ee aan sameyno waa inaan tagno Markos 9,14: 32. Ciise wuxuu ka xumaaday laba arrimood: Dhinac ahaan, waa iska caabbinta ay qareennadu isaga u soo bandhigayaan, dhinaca kale, waa caqiidadda uu ku arko dadka badan iyo xertiisa dhexdooda. Casharka qaybtaani waa guushii Boqortooyada Eebbe (kiiskan oo ku saabsan cudurrada) kuma xirna heerka iimaankeenna, laakiin waxay ku xiran tahay heerka iimaanka Ciise, ee uu mar dambe annaga nala wadaago xagga Ruuxa Quduuska ah.
Deegaankan, halkaasoo daciifnimada bini’aadamka laga hadlayo, Ciise wuxuu sharraxay in qayb ka mid ah qiimaha sare ee Boqortooyada Ilaahay ay tahay in isaga loogu soo jeesto duco leh dabeecad ku tiirsanaan. Waa maxay sababta? Sababtoo ah isaga oo keliya ayaa bixiya qiimaha buuxa ee Boqortooyada Ilaah isagoo naftiisa u huray nafteena waqti dhow. Nasiib darrose, xertii weli taas ma fahmin.
Markos 9,33: 50 wuxuu sii muujinayaa xertii in qayb ka mid ah qiimaha boqortooyada Ilaah ay tahay inaad iska dhigto rabitaankaaga sarreeya iyo awooda. Is-diidsiintu waa dariiqa boqortooyada Ilaah ka dhigaysa mid weyn, oo Ciise ku tuso isaga oo tixraacaya carruurta daciifka ah, iyo kuwa aan caawin karin.
Xertiisii ​​Ciise awood uma yeelan inay gabi ahaanba diidaan nafsaddooda, sidaa darteed waaniintani waxay tilmamaysaa Ciise oo isagu iskiis ku fiican. Waxaa naloogu yeedhay inaan aaminno - inaan aqbalno shaqadiisa oo aan raacno dariiqa nolosha ee boqortooyada Ilaah. Raacitaanka Ciise maahan inaad ahaato kan ugu weyn ama ugu awoodda badan, laakiin waa inaad diido naftaada inaad u adeegto Ilaah adoo u adeegaya dadka.
Mark 10,1: 16 wuxuu sharraxayaa sida Ciise u adeegsanayo guurka si uu u muujiyo in qiimaha sare ee Boqortooyada Ilaah ay ku jirto aaminaadda cilaaqaadyada ugu dhow. Kadib Ciise wuxuu cadeeyay sida caruurta yar-yar ee aan wax galabsan ay tusaalayaal wanaagsan u dhigaan. Kaliya kuwa leh boqortooyada Ilaah oo leh aaminaad fudud (Aaminaad) oo uu helo cunug, runtii khibrad u hel sida ay tahay ka mid ahaanshaha Boqortooyada Ilaah.
Markii Ciise mar kale baxay, nin ayaa soo ordaya, oo wejigiisuu isku tuuray hortiisa oo wuxuu weyddiiyey: "Macallin wanaagsan, maxaan sameeyaa si aan u helo nolosha weligeed ah?" Kaliya Ilaah waa wanaagsan yahay, qof kale ma jiro. Waa inaad taqaan amarrada: Waa inaanad qudh gooyn, Waa inaanad qudh gooyn, Waa inaanad wax xadin, Waa inaanad been sheegin, Waa inaanad cidna dilin, Aabbahaa iyo hooyadaana maamuus! Sayidow, wuxuu ninkii ku yidhi, Amarradan oo dhan tan iyo yaraantaydii ayaan dhawrayay. Ciisena wuxuu ku eegay isaga jacayl. Isna wuxuu ku yidhi, Weli wax baa kaa dhiman, tag oo iibi waxaad haysatid oo dhan, oo masaakiinta sii, oo waxaad jannada ku lahaan doontaa maal; Oo kaalay oo i soo raac! Ninkii aad buu u taabtay markii uu waxaas maqlay wuuna ka xumaaday sababta oo ah wuxuu lahaa hanti badan.
Ciise intuu eegay ayuu xertiisii ​​eegay oo ku yidhi, Sidee bay ugu adag tahay dadka waxbadan inay galaan boqortooyada Ilaah! Xertiisii ​​hadalladiisii ​​bay ka yaabeen. Laakiin Ciise mar kale ayuu ku yidhi, carruurteedu, siday u adag tahay inay u galaan boqortooyada Ilaah! Geela wuxuu u badan yahay inuu ku dhex maro isha irbad halkii nin taajir ah uu u galo boqortooyada Ilaah. Xitaa way ka sii cabsi badnaayeen. Midkee baa badbaadin kara goorma? Ciise intuu eegay ayuu ku yidhi, Waxanu uma suurtoobaan dadka, laakiin Ilaah ma aha. wax walbana waa u suurtoobaan Ilaah. Butros ayaa ku yidhi Ciise, Waad garanaysaa inaannu wax walba uga tagnay oo aannu ku raacnay. Ciise ayaa ugu jawaabay: Waxaan idinku leeyahay: Qof kasta oo dib uga noqda guryo, walaalo, walaalo, hooyooyin, carruur ama beero aniga aawaday iyo injiilka aawadood wax kasta boqol buu heli doonaa: hadda, waqtigan, guryo, walaalo, hooyooyin, hooyooyinka , Caruurta iyo beeraha - walow cadaadis la saarayo - iyo nolosha weligeed ah ee dunida iman doonta. Laakiin qaar badan oo hadda ah kuwa ugu horreeya ayaa ugu dambayn doona, kuwa ugudambaystauna waxay noqon doonaan kuwa ugu horreeya " (Mark 10,17-31 Tarjumaadda New Geneva).
Halkan Ciise wuu ku cadahay waxa qiimaha sare ee Boqortooyada Ilaah ku saabsan yahay. Ninkii hodanka ahaa ee u soo jeestay Ciise wuxuu lahaa waxkasta oo aan ka ahayn waxa runtii muhiimka ah: nolosha weligeed ah (Nolosha Boqortooyada Ilaah). In kasta oo uu doonayo in uu badbaadiyo noloshan, haddana ma doonayo in uu bixiyo qiimaha sare si uu u yeesho. Waxa la mid ah ayaa halkan ka dhaca sida sheekada caanka ah ee daayeerka oo gacantiisa dabinkiisa ka soo bixin karin maxaa yeelay isagu diyaar uma ahan inuu iska sii daayo waxa ku jira gacanta; sidaa darteed taajirku diyaar uma aha inuu iska daayo hagaajinta hantidiisa.
In kasta oo uu si cad u jecel yahay una jecel yahay; oo shaki la'aan anshax ahaan u toosan, ninka taajirka ahi uma maareyn inuu wajaho waxa isaga loogu talagalay (xaaladdiisa) waxaa loola jeedaa haddii uu raaco Ciise (oo ah nolosha weligeed ah). Ninkii taajirka ahaa si kadis ah ayuu uga tagay Ciise mana maqalno wax intaas ka badan oo isaga ka yimid. Wuxuu doortay, ugu yaraan waqtigaas.
Ciise wuxuu qiimeeyay xaalada ninku wuxuuna xertiisii ​​u sheegay inay aad ugu adag tahay nin taajir ah inuu galo boqortooyada Ilaah. Xaqiiqdii, gabi ahaanba waa wax aan macquul aheyn la'aanteed xagga gargaarka Ilaah! Si uu si gaar ah u muujiyo, Ciise wuxuu adeegsanayaa odhaah qosol leh - halkii geel uu ku dhex maro irbadda!
Ciise wuxuu kaloo baray inay lacag siinta masaakiinta iyo allabariyada kale ee aan ugu sameysanno Boqortooyada Ilaah inay naga khafiifiso (samaysanaya khasnad) - laakiin keliya jannada dhexdeeda, ma aha halkan dhulka. Inbadan oo aan bixinno, ayaa inbadan qaadan doonta. Si kastaba ha noqotee, tan micnaheedu maahan inaan dib ugu soo noqonno lacagtii aan ugu deeqi lahayn shaqada Ilaah, sida ay baray kooxaha qaar ku wacdiyaya injiil caafimaad iyo barwaaqo.
Waxyaabaha Ciise barayo macnihiisu waa abaalmarinta ruuxiga ah ee Boqortooyada Ilaah (hadda iyo mustaqbalkaba) way ka sii badnaan doonaan allabari kasta oo aan ku bixin karno Ciise si aan u raacno, xitaa haddii kuwa raacsan ay ku jiraan waqtiyo baahi iyo silcin.
Isaga oo ka hadlaya dhibaatooyinkaas, Ciise wuxuu ku daray ogeysiis kale oo ka hadlaya silica uu ku silcayo:
Waxay ku socdeen jidka Yeruusaalem; Ciise waa hor maray. Xertiina way gariireen, kuwii kale oo la socdayna way cabsadeen. Kolkaasuu laba-iyo-tobankii haddana waday oo u sheegay waxa isaga ku dhici doona. Waxaannu u soconnaa Yeruusaalem hadda. Halkaasna Wiilka Aadanahu wuxuu ku hoos geliyey wadaaddada sare iyo culimmada; Oo waxay ku xukumi doonaan dhimasho, oo waxay u dhiibi doonaan dadka aan Yuhuudda ahayn oo aan Ilaah aqoon. Way ku kajami doonaan, ku tufi doonaan, karbaashi doonaan ugu dambaynna way dili doonaan. Laakiin saddex maalmood ka dib wuu soo sara kici doonaa " (Mark 10,32-34 Tarjumaadda New Geneva).
Wax ka mid ah habdhaqanka Ciise, laakiin sidoo kale ereyadiisa, xertiisii ​​way yaabeen oo cabsi gelinayaan dadkii raacay. Qaarkood waxay dareemayaan in qalalaaso ay soo dhowdahay taasina waa sidaas. Erayada Ciise waa xusuus cad oo muujinaya cidda ugu dambeyntii bixisa qiimaha aadka u sarreeya ee Boqortooyada Ilaah - oo Ciise baa annaga inoo yeelay. Yaanan waligaa ilaawin taas. Isagu waa kan deeqsiga leh waxaana naloogu yeeray inaan raacno si aan ugu wadaagno deeqsinimadiisa. Maxaa inaga celinaya inaan noqonno deeqsinimo sida Ciise? Tani waa wax ay tahay inaan ka fikirno oo aan ka barinno.
Qaybta ku saabsan qiimaha sare ee Boqortooyada Ilaahay, waxaan u nimid Mark 10,35: 45. Yacquub iyo Yooxanaa, wiilashii Sebedi, waxay Ciise u yimaadeen inay isaga weyddiistaan ​​meel sare oo boqortooyadiisa ku taal. Way adag tahay in la rumeeysto inay iyagu is riixeeyaan oo ay iyagu isjecel yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxaan ognahay in dabeecadaha noocaas ahi ay si qoto dheer ugu xidhnaayeen dabeecaddeenna bini'aadamka ee dhacday. Haddii labada xertiba ka warqabaan qiimaha dhabta ah ee jagada sare ee boqortooyada Ilaah ku jirto, kuma dhici laheyn inay ku weydiistaan ​​Ciise. Ciise wuxuu uga digay inay xanuunsanayaan. Si kastaba ha noqotee, tani micnaheedu maahan inay tani u keeni doonto meel sare oo boqortooyada Ilaah ah, maxaa yeelay qof kasta waa inuu silco. Eebbe kaligiis ayaa xaq u leh jago sare.
Kuwa kale ee xerta ahaa, oo aan shaki ku jirin inay iyagu isjecel yihiin sida Yacquub iyo Yooxanaa, way ka xanaaqeen codsigooda. Jagooyinkaas awooda iyo sharafta ayaa waliba lagayaabaa inay mid doonayeen. Taasi waa sababta uu Ciise mar kale u dulqaatay iyaga oo u sharraxaya qiimaha ay gabi ahaanba ku kala duwan yihiin Boqortooyada Ilaah, halkaasoo weynaanta dhabta ah lagu muujiyo adeegga is-hoosaysiinta.
Ciise qudhiisu waa tusaalaha ugu horeeya ee is-hoosaysiinta. Wuxuu u yimid inuu naftiisa u bixiyo midiidinka dhibta Ilaah, sida lagu sii sheegay Ishacyaah 53, oo wuxuu "madax furasho u noqday kuwa badan."
Aaminaad joogto ah
Qaybta mawduucayagu wuxuu ku dhammaanayaa Mark 10,46: 52, kaasoo sharraxaya sida Ciise iyo xertiisu uga soo guureen Yerixoo ilaa Yeruusaalem, halkaas oo uu ku silcin doono oo ku dhiman doono. Jidkii waxay la kulmeen nin indha la 'oo Bartimayos la odhan jiray oo Ciise baryay. Ciise wuxuu ku jawaabaya isagoo aragga indhaha siinaya oo u sheegaya "rumaysadkaagu waa ku caawiyey". Halkaas Bartimayos wuu kula biirayaa Ciise.
Marka hore, waa cashar ku saabsan aaminsanaanta aadanaha, oo ah mid aan dhammaystirnayn oo haddana wax ku ool ah haddii la adkaysto. Ugu dambayntiina, waxay ku saabsan tahay rumaysadka joogtada ah ee Ciise Masiix.
Haddaba markan qiimaha sare ee Boqortooyada Eebbe waa in markale lagu soo xusaa: ku tiirsanaan duco ah, is-diidid, daacadnimo, deeqsinimo, is-hoosaysiin iyo iimaan adag. Waxaan la soconaa Boqortooyada Ilaahay markii aan aqbalno oo aan ku dhaqanno astaamahan. Miyay taasi u muuqataa cabsi yar? Haa, illaa aan ka ogaanno in kuwani ay yihiin sifooyinka Ciise laftiisa - tayada uu isagu Ruuxa Quduuska ah kula wadaago kuwa isaga isku halleeya oo si kalsooni leh ula raacaya.
Kaqeybgalkeena nolosha Boqortooyada ciise waligeed maahan mid hagaagsan, laakiin markii aan raacno ciise, waxay "ku wareejineysaa" anaga. Taasi waa habka isku xigxiga ee Masiixiga. Maahan wax ku saabsan helitaanka booska boqortooyada Ilaah - waxaan boos ku leenahay Ciise. Maahan wax ku kasbashada nimcada Ilaah - Thanks to Jesus waxaan leenahay nimcada Ilaah. Waa muhiim in aan wadaagno jacaylka Ciise iyo nolosha. Wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinkaas oo dhan si buuxda oo faro badan oo diyaar u ah inuu nala wadaago, taasina waa midda saxda ah ee uu ku sameeyo adeegga Ruuxa Quduuska ah. Saaxiibbada qaaliga ah iyo kuwa raacsan ee Ciise, qalbiyadiina iyo noloshaada oo dhan u fur Ciise. Raac isaga oo ka hel isaga! Kaalay oo boqortooyada ka buuxsama.